🍽️ rie & ṅụọ | Gaa na Hultsfred
Detuo onwe gi gburugburu obodo!
Ime obodo, nke dị nso n'ọdọ mmiri, esi nri ụlọ, etiti… ebe a bụ ihe ị ga-eri na ihe ọṅụṅụ maka ụtọ niile. Nwee kọfị, ezigbo nri abalị ma ọ bụ mesoo onwe gị na pizza.
Homeslice Pizzeria dị na etiti Virserum n'akụkụ àkwà mmiri ahụ.
N'etiti Hultsfred bụ Lavida Café. N'ime ụlọ sara mbara ma dị ụtọ, ị nwere ike ịzụta ihe niile site na achịcha na achịcha achịcha na nri nri ehihie. Ikike ị na-emeghị
Ụlọ oriri na ọ Kụ Kụ Kungen
Ụlọ oriri na ọungụ Kụ Kungen dị n'etiti Hultsfred n'etiti atụmatụ Tor na Köpingsparken. Ụlọ oriri na ọ Kingụ Kingụ King na -enye pizzas, burgers, azụ na ibe na salads. Pụrụ iche bụ nwoke ahụ
Ndịda Virserum bụ akụrụngwa Dackestupet na Friluftscafé - Dackestupet. N'oge oyi, ebe a na-eme egwuregwu ski na oge ndị ọzọ, ụlọ ọrụ maka ịgba ịnyịnya ígwè, MTB na njem. N'ime ime ụlọ
Coffee na-achọ kọfị ka ọ bụ agụụ na-agụ gị? Chọrọ otu iko kọfị a mịrị amị ọhụrụ? Ka ị chọrọ nanị ịgbanye mmanụ n'ụgbọala gị? Anyị na-enye gị ahịa nri ngwa ngwa, ato uto,
Nri esi nri nke ọma sitere na ihe ndị Sweden. Enwere ike ịdeba ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka nnọkọ nzuzo, ọ ga-ekwe omume ịnweta nri. Annika nwere mmasị dị ukwuu na egwu
Na Lönnebergaboa, nri kwesịrị ịbụ mgbe ị na-ekerịta ndị enyi, yana maka ọbịbịa gị ịbụ ihe na-enweghị oke, anyị na-enwe oge
Charlie Pizzeria dị na Mörlunda na-enye pizzas, burgers, barbecue na salads. Enwere ike ịchọta "Mörlunda pizza" na Charlie Pizzeria
Gaghị echefu Café Flotten mgbe ị gara na mpaghara Companylọ Ọrụ. Cafe a na-agba ndị na-enweghị uru site na mkpakọrịta yana na-enye aka na ọrụ mkpakọrịta. Ebe a nwere ike ịzụta ice cream ma ọ bụ
N'etiti Målilla na Virserum ị ga-ahụ obere obodo Flaten na Bageriet Björkaholm. N'ebe a, ị na-esi nri na obere nha na ihe ndị dị elu. Buns, baguettes, pretzels
Pizza nke Målilla
Pizzeria dị n'etiti na Målilla. Na mgbakwunye na pizza, kebabs na salads dịkwa na menu. Ha abụọ ịtụ na weta ma ọ bụ nọdụ ala
Vetlandavägen dị na Målilla bụ Bandy Grill. N'ebe a ị nwere ike ịhọrọ n'etiti burgers, sausaji, meatballs, kebabs, ọkụkọ. N'oge ọkọchị, enwekwara mbara ala dị n'èzí.
Restaurantlọ oriri na ọ Chineseụ Chineseụ ndị China-Vietnamese nwere ọdịnala ndị China na Vietnam. Enwere nri dịgasị iche iche, nri ụlọ ndị Sweden, á la carte na
Talọ oriri na ọ Pụ andụ na Pizzeria Emåbaren
Emåbaren bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na pizzeria. A na-esi nri ụlọ emebere ebe a maka nri ehihie n'etiti 1100-1400. Dị ka ihe ọzọ na efere taa, e nwere pizza, salads ma ọ bụ kebabs. Iji
Kafe a dị na Virserums Konsthall. N'ebe a, ị nwere ike ịgagharị na ebe ngosi nka ma nwee ekele maka nka wee nwee ọmarịcha kọfị. A na-enye ya ebe a
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ngwa ngwa, Sibylla bụ eriri nri ngwa ngwa ama ama. Sibylla na-enye ihe niile si Swedish kpochapụwo "a esi ya na achịcha" (ie a esie ya soseji na
Centralkonditoriet bụ ebe a na-eme achịcha na ebe dị mma ị nwere ike ịnwe kọfị ma ọ bụ jiri gị zụta ụlọ ọhụrụ. Ga - ahụ ụdị achịcha dị iche iche, achịcha, achịcha
Na roundabout na Målilla bụ Grillstugan na ebe a burgers na sausaji na Mash na ngwa ndị ọzọ, yana ice cream na-eje ozi. Mgbe ihu igwe kwere, ọ na-adị
Ndị Ọrụ Pizzeria
Pizzeria dị na etiti Virserum. N'ebe a, ị na-eri nri nke ọma na ụlọ mara mma. Na Restaurang Betjänten ị na-enweta ezigbo ọrụ na ezigbo mma. Ị nwere ike iri nri
Pizzeria nke dị n'etiti Hultsfred. Na mgbakwunye na Pizza, kebabs na salads dịkwa na menu. N'oge ọkọchị, a na-enwekwa mpụga n'èzí. Enwere 24
Naanị ngwa ahịa kacha mma dị ebe a. A na-emepụta anụ na mpaghara ma lekọta ya nke ọma. N'ụlọ ahịa ị ga-ahụ ọtụtụ ihe site na anụ. Ribs na fillet, minced anụ na
N'ugbo Räven & Osten, Lida n'èzí Järnforsen, a na-eme cheese n'ụzọ dị nta na obere ihe. Mmiri ara ehi si n'aka onye ọrụ ugbo nọ n'ógbè ahụ. N'akụkụ mmiri ara ehi dị
"Nri dị mma na akọ na uche dị ọcha, si n'ugbo." N'ebe a, ị nwere ike ịtụ anụ organic na mpaghara emepụtara. Gaa leta ma ọ bụ ezumike ma biri n'ugbo organic, zute ụmụ anụmanụ
Ụlọ ahịa ugbo bụ ebe njem nlegharị anya na-adọrọ mmasị maka ndị chọrọ ịzụta ngwaahịa kacha mma. N'oge oge strawberry, ị nwere ike ịga were strawberries nke gị. N'ụlọ ahịa